အောင်သစ် - နွေဦးတော်လှန်ရေး၏နိုင်ငံရေးအဓိပ္ပါယ် - MoeMaKa Media
Home / Aung Thit / Coup / Currents / Opinion / Spring Revolution / အောင်သစ် - နွေဦးတော်လှန်ရေး၏နိုင်ငံရေးအဓိပ္ပါယ်
အောင်သစ် - နွေဦးတော်လှန်ရေး၏နိုင်ငံရေးအဓိပ္ပါယ်
Aung Thit, Coup, Currents, Opinion, Spring Revolution
(မိုးမခ) ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၂၁
ယနေ့ကမ္ဘာကြီးသည် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာနယ်ပယ်မှ ပြောင်းလဲမှုကို နည်းပညာတော်လှန်ရေး ခေတ်တခေတ် (Technological Revolution)အဖြစ်ပြောကြသည်။ထိုအ ပြောင်းအလဲသည် လူတို့၏ နေ့စဉ်နေထိုင်မှု ဘဝတခုလုံးကိုပါ ပြောင်းလဲ ပစ်လိုက်သည်။ ထိုနည်းပညာအပြောင်းအလဲမှ ပုံရိပ်ယောင်လောက (Virtual World)တခုပေါ်လာသည်။ ပုံရိပ်ယောင် လောက ဆိုသည်မှာ လူချင်းအပြင် မှာတွေ့စရာမလိုတော့ဘဲအင်တာနက်ပေါ်မှာပဲ တွေ့ကြ ဆုံကြ၊ သာကြောင်းမာကြောင်းကစလို့ နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များ၏ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ အထိ လုပ်လာကြသည့်လောကပင်ဖြစ်သည်။
နည်းပညာတော်လှန်ရေးခေတ် အပြောင်းအလဲနှင့်ပတ်သက်၍ ဘာတွေပြောင်းလဲနေတာလဲဆိုလျှင် Industrial Revolution(IR4.o)၊ Artificial Intelligence(AI)၊ Fifth-generation Wireless Technologies (5G Network)၊ Nanotechnologies၊ Alternative fuel and energy systems၊ Biotechnologies၊ Genetic Engineering အစရှိသည့် နည်းပညာ အပြောင်းအလဲအကြောင်းတို့ကို နည်းနည်းစီ မြည်းစမ်းဖတ်ကြည့်ရုံမျှဖြင့် ကမ္ဘာကြီးသည် လူတို့၏ဘဝနေထိုင်မှုကို ဤသို့ပြောင်း လဲပစ်နေပါလားဆိုသည်ကို တအံ့တသြ တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ယခုနောက်ဆုံး ကမ္ဘာကြီးသည် "Internet of Things(IoT)" လောကကြီး ဖြစ်လာနေသည်၊ မြန်မာပြန်စကားလုံးတော့ မတွေ့မိသေးပါ၊ အကြမ်းအားဖြင့် အရာရာအင်တာနက်ဖြစ်လာမည့်သ ဘောဟု နားလည်ရပေသည်။ DiscoverTec ဝက်ဆိုက်က ဆောင်းပါးတပုဒ်ထဲတွင် ယခုလို ရေးထား သည်။ "The deeper we dive into technology, the more it seems we try to blend the physical and virtual worlds together. Smart speakers, smart homes and even smart cars are the tech wave to ride in the future, but it’s just the beginning."
နည်းပညာတော်လှန်ရေးခေတ်မှာ ပုံရိပ်ယောင်လောကနှင့် အကောင်အထည်နှင့်ရှိနေ သော အစစ်အမှန်လောကကို ပေါင်းစည်းပစ်တော့မည်၊ ထိုသို့ ပေါင်းစည်းမှုသည် အစပိုင်းသာ ရှိသေးသည်ဆိုလျှင် နောင်တွင် လူတဦးချင်းစီ၏ဘဝသည် ပုံရိပ်ယောင်လောကနှင့်အစစ်အမှန်လောက ပေါင်းစပ်ထားသောဘဝ ဖြစ်နေတော့မည်။ ထိုအပြောင်းအလဲသည် .....။
အမှန်တကယ် ဆွေးနွေးချင်သည်မှာ နည်းပညာအကြောင်း မဟုတ်ပါ။ နည်းပညာတော်လှန်ရေးသည် လူတို့၏နေထိုင်ဘဝ ကို မည်မျှပြောင်းလဲသွားကြောင်း၊ ထို့ထက်ပို၍ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု ... စသည့် နယ်ပယ်အသီးသီးကိုပါ ရိုက်ခတ်ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ကြောင်း ပြောလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျေးပိုင်ကျွန်ပိုင်ခေတ်မှနေ၍ ပဒေသရာဇ်ခေတ်၊ မြေရှင်ပဒေသရာဇ်ခေတ်၊ အရင်းရှင်ခေတ် စသဖြင့် ခေတ်စနစ်တွေ ပြောင်းလဲလာခြင်းသည် သူ့အလိုလို ပြောင်းလဲလာခြင်းမဟုတ်။ ဖြစ်ထွန်းလာသည့် ပကတိအကြောင်းအချက်များကခေတ်တခေတ် မှ နောက်ခေတ်တခေတ် ပြောင်းလဲဖို့ အကြောင်းခံများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့် ခေတ်များပြောင်းလဲလာခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုပြောင်း လဲလာသည့် အကြောင်းခံများဆိုရာတွင် အစောဆုံးနှင့် အဓိကအကျဆုံးအပြောင်းအလဲမှာ ခေတ်တခေတ်တွင် အသုံးပြုနေသော ကုန်ထုတ်ကရိယာ(tools)များက စတင်ပြောင်းလဲလာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကုန်ထုတ်ကရိယာများ အပြောင်းအလဲက အလုပ်ယန္တရား နှင့်လူတို့၏နေထိုင်မှုဘဝကို ပြောင်းလဲလာစေပြီး၊ ထိုအပြောင်းအလဲမှတဆင့် ခေတ်များ တခေတ်မှတခေတ်သို့ ပြောင်းလဲ လာကြခြင်းဖြစ်သည်။
ယနေ့ နည်းပညာတော်လှန်ရေးခေတ်အပြောင်းအလဲဆိုသည်မှာ ကုန်ထုတ်ကရိယာ(tool) အပြောင်းအလဲပင်ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းပညာအပြောင်းအလဲသည် ၁၉၇၅ ဝန်းကျင်မှစ၍ ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်၊ ဒစ်ဂျယ်တယ် စသဖြင့် ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ပြောင်းလဲ လာသည်။
နည်းပညာအပြောင်းအလဲသည် ကုန်ထုတ်ကရိယာအပြောင်းအလဲဖြစ်သည့်အတွက် ထိုအ ပြောင်းအလဲသည် ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ ခေတ်စနစ်အပြောင်းအလဲပါ ဖြစ်ပေါ်စေတော့မည်၊ သို့မဟုတ် စတင်ဖြစ်ပေါ်နေပြီ။ ဘယ်စနစ်က ဘယ်စနစ်ကို ပြောင်းလဲမှာ လဲဆိုလျှင် သမိုင်းခေတ်များ ပြောင်းလဲ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည့်အတိုင်း ယနေ့ရှိနေသော ခေတ်စနစ်မှ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ခေတ်စနစ်တ ခုသို့ ပြောင်းလဲမည်ဟုသာ ယေဘုယျအားဖြင့် ဆိုနိုင်ပါဦးမည်။ ခေတ်စနစ်ကို နာမည်ပေးကင်ပွန်းတပ်သည့် အလုပ်ကို နိုင်ငံရေး ဒဿနပညာရှင်များ လုပ်ကြပါလိမ့်မည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နှင့် ဒေသတွင်းဆိုင်ရာ
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးနောက် တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနှင့် ဖက်ဆစ်စနစ်ကို အပြီးတိုင် နှိမ်နင်းလိုက်နိုင်ပြီဟု ထင်စရာရှိသည်။ သို့သော် ကမ္ဘာကြီး၏ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးကို အန္တရာယ်ပြုနေသော အကြမ်းဖက်မှု၊ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု၊ စစ်အာဏာသိမ်းမှု၊ ရက် စက်ကြမ်းကြုတ်မှု၊ လူ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုတို့သည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများတွင် ရှိနေ ဆဲဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂသမိုင်းကြောင်းမှာပင် သက်တမ်း ၇၅ နှစ်ကျော်လာသည်အထိ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေး၊ လူ့ အခွင့်အရေး တို့အတွက် ဆောင်ရွက်နေရဆဲဖြစ်ကြောင်းကို ယခုလို ရေးသားထားသည်။
"Now, more than 75 years later, the United Nations is still working to maintain international peace and security, give humanitarian assistance to those in need, protect human rights, and uphold international law."
ထိုသို့ဆောင်ရွက်နေရဆဲ ဖြစ်နေသည်မှာ ကမ္ဘာကြီးတွင်၊ ဒေသများအတွင်းတွင် မငြိမ်းချမ်းသော၊ မလုံခြုံသော ခေတ်စနစ်များ ရှိနေသေးသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုအခြေအနေများကို တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနှင့် တိုက်ဖျက် နေကြသလို၊ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအလိုက်လည်း သက် ဆိုင်ရာနိုင်ငံများရှိ ပြည်သူများက ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်နေကြသည်။ လူလူချင်း မတရား နိုင့်ထက်စီးနင်း ပြုကျင့်ခံရသည့်အခြေအနေကို ကမ္ဘာ့ပြည်သူများက လက်မခံသလို၊ နည်းပညာဆိုသော ကုန်ထုတ်က ရိယာအသစ် ပြောင်းလဲသည့်အခြေအနေ၏ရိုက်ခတ်မှုနှင့်လည်း အချိန်ကိုက်ဖြစ်နေသောကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ခေတ်စနစ်တ ခုစီသို့ ဦးတည်ပြောင်းလဲနေပြီဟု ပြောနိုင်သည်။ ကမ္ဘာကြီးတွင် ဖက်ဆစ်စနစ် အကြွင်းအကျန်များ ချုပ်ငြိမ်းတော့မည်မှာ ဧကန် ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတနိုင်ငံနှင့်တနိုင်ငံ ရောက်ရှိနေသောခေတ်စနစ်အခြေအနေချင်း မတူညီကြပါ။ တချို့က ပဒေသရာဇ်တပိုင်း၊ တချို့က အရင်းရှင်ခေတ်၊ တချို့က စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကြီးစိုးနေဆဲ စသဖြင့် ရှိကြသည်။ မည်သို့ပင် မတူညီကြသည်ဖြစ်စေ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကုန်ထုတ်ကရိယာ စတင်ပြောင်းလဲမှုမှ နယ်ပယ်အသီးသီးသို့ ရိုက်ခတ်လာသည့် ခေတ်စနစ်အပြောင်းအလဲ ရေစီးကြောင်းသည် နိုင်ငံတ နိုင်ငံချင်းစီ၏ခေတ်စနစ်ဟောင်းကို ခေတ်စနစ်အသစ်တခုစီသို့ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်သွားမည်သာ ဖြစ် သည်။ ထိုသို့ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ရန်မှာ တော်လှန်ရေးသဘောတရားအရဆိုလျှင် ဆင့်ကဲဖြစ်ပေါ်ပြောင်း လဲမှုမှတဆင့် အရှိန်အ ဟုန်မြှင့်ပြောင်းလဲမှု(တော်လှန်ပြောင်းလဲမှု)အဆင့်ကို ဖြတ်သန်းကြရပေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဖက်ဆစ်လက္ခဏာ စစ်အာဏာရှင်စနစ် နှင့် နွေဦးတော်လှန်ရေး
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဖက်ဆစ်လက္ခဏာဆောင်သည့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင် တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့ကြသော တိုက်ပွဲအဆက်ဆက်၏အကျိုးဆက်အဖြစ် အရှိန်အဟုန်မြှင့်ပြောင်းလဲသည့် နွေဦးတော်လှန်ရေးအဆင့်ကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
ဘက်နှစ်ဘက် တိုက်ပွဲဆင်နေလျှင် ယေဘုယျအားဖြင့် ကစားပွဲတပွဲကို စဉ်းစားကြသလိုပင် အနိုင်-အရှုံးအကြောင်းကို စဉ်းစားကြသည်။ အင်အားချိန်ခွင်လျှာ နှင့် အနိုင်အရှုံးကို ဆက်စပ်စဉ်းစား ကြသည်။ သို့သော် ခေတ်စနစ်တခုမှတခုကို အပြောင်း အလဲဖြစ်စဉ်သည် အနိုင်အရှုံးဆိုသည့်သဘောထက် ကျော်လွန်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုတွင် ခေတ်စနစ်ဟောင်းတခုမှ ခေတ်စ နစ်အသစ်တခုကို ပြောင်းလဲရန် အခြေအနေ ရင့်မှည့်နေပြီဆိုလျှင် ဘယ်သူနိုင်သည် ရှုံးသည်ဆိုတာထက် ပြောင်းလဲမှုမှာ ဖြစ်ကို ဖြစ်လာရပေမည်၊ ရှောင်လွှဲ၍ မရနိုင်။
ယနေ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးအကြောင်း ဆွေးနွေးကြ၊ ပြောကြဆိုကြသည့်အခါတွင်လည်း စဉ်းစားချက်များက စစ်အုပ်စု ဘက်က နိုင်မှာလား၊ ပြည်သူလူထုဘက်က နိုင်မှာလားဆိုသည့် ဘောင်ထဲမှသာ စဉ်းစားကြသည်။ ထိုသို့အသားကျနေသည့် စဉ်းစားမှုမျိုးဖြင့် နွေဦးတော်လှန်ရေးကို ချဉ်း ကပ်ရန် မလုံလောက်ပါ။ နွေဦးတော်လှန်ရေးသည် အနိုင် အရှုံး ဆိုသည့်ကိစ္စထက် ကျော်လွန်သည်။
အမှန်တကယ်မှာ မအလပြုတ်ကျရေး၊ စစ်ကောင်စီ ချေမှုန်းရေးကိစ္စတိိုု့သည် နွေဦးတော်လှန်ရေး တရားကိုယ် အကြောင်း တရား၏ ထင်ဟပ်ချက်သာ ဖြစ်သည်။
နွေဦးတော်လှန်ရေး၏တရားကိုယ်အကြောင်းတရားမှာ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အရှိန်အဟုန်မြင့်ပြောင်းလဲရန် ရင့်မှည့်နေသောအခြေအနေကြောင့် နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ ခေတ်စနစ်တခုမှ ပိုမို ကောင်းမွန်သည့်ခေတ်စနစ်တခုသို့ ပြောင်းလဲသွား နေသောဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။ နည်းပညာရိုက်ခတ်မှုဖြင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေတ်စနစ် ပြောင်းလဲရေးဖြစ်စဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် နွေဦးတော်လှန်ရေး၏နိုင်ငံရေးအဓိပ္ပါယ်ဆိုသည်မှာ မအလ ပြုတ်ကျရေး၊ စစ်ခေါင်းဆောင်များ ပြုတ်ကျရေး ဆိုသည့် အပေါ်ယံ ထင်ဟပ်ချက်မျှ မဟုတ်၊ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် စစ်အာဏာရှင်စနစ်မှ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ အရှိန်အဟုန်မြင့် ပြောင်းလဲနေခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲရေးသည် ကမ္ဘာ့ရေစီးကြောင်း၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည်နှင့်အညီ သေချာပေါက် ပြောင်းလဲသွားမည်သာ ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် နွေဦးတော်လှန်ရေးကို နိုင်မှာလား၊ ရှုံးမှာလားဆိုသည်ထက်၊ စစ်တပ်ကတော့ ခိုင်မာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လို့ ဘယ်တော့မှ နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုသည်ထက်၊ ပြည်သူလူထုဘက်က အမှန်တရားဖြစ်လို့ ပြည်သူလူထုက နိုင်မှာပဲဆိုသည်ထက် ကမ္ဘာကြီး၏သမိုင်းခေတ်များ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလာသည့်သဘာဝအတိုင်း ယနေ့ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အခြေအနေများအရ စစ်အာဏာရှင်ခေတ်မှ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီခေတ်သို့ လုံးဝ ပြောင်းလဲသွားမည်သာဖြစ် ကြောင်း သိမြင် ယုံကြည်ရန်လိုသည်။ တခုပြောစရာရှိသည်မှာ ခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်နေသည့် သက်ဆိုင်သော အင်အားစုများ အားလုံး၏ အမှား အမှန် လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ်တွင် မြန်ခြင်း၊ ကြာခြင်းတို့ ဖြစ်ပေမည်။
ဤနေရာတွင် ပြည်သူများအလွန်သိချင်ကြသည့် ဒီပွဲက နိုင်မှာလား၊ ရှုံးမှာလား၊ ကြာဦး မှာလားဆိုသည့်မေးခွန်းကို ဖြေရလျှင် ခေတ်စနစ်ပြောင်းမှာသေချာသည်၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ချုပ်ငြိမ်းမှာသေချာသည်၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ရောက်မှာ သေချာသည် ဆိုသည့်အချက်ကို အခိုင် အမာ ယုံကြည်ထားပြီး မြန်ခြင်း၊ ကြာခြင်းအပေါ်တွင် စိတ်ပိုင်း၊ ရုပ်ပိုင်း အစစ အရာရာ ပြင်ဆင်ထားရန်သာ လိုအပ်ကြောင်း ပြောပါရစေ။
တဆက်တည်း ပြောရမည်မှာ နွေဦးတော်လှန်ရေးကို ပြဿနာတရပ်အဖြစ် ချဉ်းကပ်ဖြေ ရှင်းရေးအတွက် နှုတ်အားဖြင့်၊ စာအားဖြင့်၊ ကာယကံမြောက်အားဖြင့် ပါဝင်လိုသူများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံများအနေဖြင့် နွေဦးတော်လှန်ရေးသည် ခေတ်စ နစ်ဆိုးတခုမှ ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ခေတ်စနစ်အသစ်တခုဆီ အရှိန်အဟုန်မြင့် ပြောင်းလဲနေသည့်ဖြစ်စဉ်တခုဟု နားလည်မှသာ ပြဿနာဖြေရှင်းရေး၏အဖြေမှန် သို့မဟုတ် မိမိ မည်သို့ပါဝင်ရမလဲဆိုသည့်နည်းနာကို ရှာတွေ့ပေလိမ့်မည်။ ။
(နွေဦးပစ်မှတ် စာစောင် အမှတ် ၈ မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
အောင်သစ် - နွေဦးတော်လှန်ရေး၏နိုင်ငံရေးအဓိပ္ပါယ် Reviewed by MoeMaKa on 7:03 AM Rating: 5